Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l1112 lak
Ny fitondran-tena Kristianina
Alakamisy 13 Des.
Ankoatra ny eo anivon’ny fianakaviana, ny Kristianina dia manana adidy hafa eo anivon’ny fiaraha-monina sy amin’ny asa – ka mila fahalalana mazava ny fomba fijery ara-Baiboly manao hoe «Eto amin’izao tontolo ny Kristianina fa tsy an’izao tontolo izao» (Jao. 17:14-18)).
Hevero ireto sehatra telo eo amin’ny fiainana andavan’andro ireto ary ifanakalozy hevitra ny andraikitry ny Kristianina eo amin’ny lafiny fomba fiaina sy fitondran-tena.
1. Ny fifandraisana eo amin’ny mpampiasa sy ny mpiasa (Jak. 5:4-6; Efes. 6:5-9). Ankoatra ny maha-mitovy ny mpiasa rehetra ao amin’i Kristy, ny mpampiasa kristianina dia tsy maintsy tarihin’ny fitsipi-piainana mitaky ny valin-kasasarana mitovy fatra amin’ny asa atao. Etsy andaniny, ny mpiasa kristianina koa dia tokony hahatohitra ny fakam-panahy tsy ho kamo amin’ny asa. « Aoka ny ray aman-dreny tsy hanao fahotana lehibe ka hamela ny zanany tsy hanana na inona na inona hataony. Tsy ho ela dia hahalala ho tia ny fitsilamodamoana ny zanaka, ary ho lehibe ka ho tonga lehilahy sy vehivavy kamo tsy misy ilana azy. Koa rehefa lehibe tokony hamelona ny tenany izy, ka mahita asa, dia hiasa amin’ny hakamoana sy ny fipetraham-potsiny kanefa manantena handray karama valin-kasasarana mitovy amin’ny azon’izay miasa fatratra.» - COL, t. 345.
2. Ny adidy maha-olom-pirenana (Rôm. 13:1-7). Ny Kristianina dia mametraka an’Andriamanitra eo alohan’ny zavatra rehetra, ary mandandalanja ny fihetsika aman’andraikitra rehetra mifanaraka amin’io fitsipi-piainana io. Noho izany antony izany, ny Kristianina ohatra dia tokony hanohitra ny fanavakavahana amin’ny endrika rehetra, eny, na zavatra misy sazy ôfisialy mipetraka aza. Amin’izay ihany, «ny fahatokiana an’Andriamanitra atao loha laharana dia tsy manome fahefana na iza na iza ho tonga mahaleo tena ka hamorona disadisa sy korontana eo amin’ny fiaraha-monina. Ny Kristianina dia mandoa hetra, mandray anjara amin’ny adidy maha-olom-pirenena azy, manaja fitsipika mifehy ny fifamoivoizana sy ny lalàna momba ny fananana, ary miara-miasa amin’ny manam-pahefana ara-panjakana eo amin’ny fifehezana sy ny fiadiana amin’ny habibiana sy herisetra.» — HSDAT, t. 701.
3. Ny andraikitra eo anivon’ny fiaraha-monina (Isa. 61:1-3; Mat. 25:31-46). Ifanakalozy hevitra ireto fanambarana manaraka ireto ho fanazavana ny andalan-teny etsy ambony : « Azon’ny Kristianina atao ny manao ny antsony hitady ny fanjakan’ Andriamanitra raha toa ka ampirisihin’ny fitiavany ny namany izy, ka manohy hatrany ny asany eo amin’ny toe-panahy ho fampiraisana ny fianakaviana, sy eo amin’ny fiainana ara-toe-karena, ny fiainam-pirenena ary ny fiainana ara-pôlitika (…) Amin’ny fandraisana adidy eo amin’ny asa maha-olom-pirenena ho soa iombonana, amin’ny fahatokiana eo amin’ny antson’ny olona iray ho an’ny fiaraha-monina, amin’izay ihany no hahatonga ny olona hahatoky amin’ny fanehoana ny ohatra nomen’i Kristy.” — CC, 1996), t. 97.
Eo amin’ny fifaneraseranao arak’asa sy ara-piaraha-monina, moa hitan’ny olona taratra va ny tombam-bidy maha-Kristianina anao? Manàna fahitsiana momba ny tenanao (na dia maharary aza izany !). Lafiny inona eo amin’ny fiainanao no mitarika ny hafa ho amin’ny finoana tananao? Inona no ambaran’ny valin-teninao aminao mahakasika ny fiaina izay ivelomanao?